Kpido: b2b infographic
Anyị ekekọrịtala 2015 B2B Ahịa Akara Aka, Budget na Trends yana usoro azụmaahịa kachasị ewu ewu nke ndị ahịa B2B jiri. Mana kedu usoro atụmatụ azụmaahịa B2B kachasị dị irè? Dị ka ọmụmụ ahụ si kwuo, ihe nzuzo maka ịga nke ọma ahịa ọdịnaya bụ ịdepụta usoro ọdịnaya gị ma rapara na ya. O kpughekwara na ndị na-ere ahịa ọdịnaya na-emepụtawanye ọdịnaya mana ha ka na-agbasi mbọ ike soro ROI, ọkachasị mgbe ha
Kwa afọ, ego etinyere na atụmatụ ịzụ ahịa ọdịnaya dị ka ịrị elu. Kpọmkwem, ndị na-ere ahịa ọdịnaya B2B na-achọ inweta mmata nke ọma, ọgbọ na-eduga, nnweta ndị ahịa na iguzosi ike n'ihe, ịzụ ahịa weebụsaịtị, na ire ahịa site na ọdịnaya ha. Dika ndi ahia ahia banyere ihe ha choro iji kesaa ihe ha nwere, nke bu uzo, uzo, na uzo ndi na-enweta uru kasịnụ? Njikọ njikọ LinkedIn na MarketingProfs na Ọdịnaya Marketing Institute